TTSweet: Sky park ပေါ်မှ ခြင်္သေ့ကျွန်းအား ငုံ့ကြည့်ခြင်း ...
$20....not worth it . From the photo what I've seen is nothing much. But for the parents if their children want to go....may be worth it :)
ဝက်ဝံလေး August 11, 2010 at 5:08 PM
စင်ကာပူလာရင် လိုက်ပို့ ဒါဗြဲ ဟဲဟဲ
ရုံးမသွားမှန်းသိတယ်နော် ဟွင့် ရုံးပြေးး ရုံးပြေး ဟိဟိ
T T Sweet August 11, 2010 at 5:13 PM
ရုံးပိတ်တာကွ ... မပြေးဘူး ၀က်ဝံလေးရေ့ ။ ၉ရက်တောင်ပိတ်တာ ... ဒီနေ့ဆို ၅ရက် ကုန်သွားပြီ ။ သမြောလိုက်တာ ...။
သက်ဝေ August 11, 2010 at 5:26 PM
Sky Park မတက်ရဲဘူး
ဒါနဲ့ ရုံးက ဘာလို့ ပိတ်တာလဲ.....................
(ကောင်းကောင်း နေမကောင်းသေး၍ စိတ်ညစ်ညစ်နဲ့ လိုက်ရစ်နေသည်)
သက်ဝေ August 11, 2010 at 5:36 PM
ဓါတ်ပုံတွေ လှတဲ့အကြောင်း... ခုနက ပြောဖို့ မေ့သွားလို့ တခေါက်ထပ်လာတယ်...
အဲဒါတွေက တီတီဆွိလက်ရာလား... ဆရာကြီး လက်ရာလား... မှန်မှန်ပြောနော်...း))
$20....not worth it . From the photo what I've seen is nothing much.
တကယ်တမ်း ဓါတ်ပုံလေးတွေပဲကြည့်မယ်ဆိုရင် ငွေ၂၀ မတန်ဘူးလို့ ထင်စရာပါ။ ကိုယ်ကိုတိုင် အပေါ်ကိုရောက်တော့မှ တွေ့ကြုံရတဲ့ ခံစားမှုက ငွေ၂၀မက တန်ပါတယ်။ ကျွန်တော့ Singapore Flyer ပေါ်လဲရောက်ဖူးပါတယ်။ ငွေ၂၅ ကျပ်ပေးရတာ။ အခု MBS ပေါ်က ပိုတန်တယ်လို့ထင်တယ်။
နောက်ပြီး Civil Structure Engineer တစ်ယောက်အနေနဲ့ ရဲရဲတင်းတင်းကို အလွန်အင်မတန်ခက်ခဲတဲ့ Cantilever ဆောက်သွားတာ ချီးကျူးစရာ တစ်ခုပါပဲ။
ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ ပုံက နည်းနည်းပါ။ တီဆွိရိုက်တာပါဗျာ။
Thu August 12, 2010 at 11:54 AM
dathana August 12, 2010 at 12:29 PM
ပုံတွေက ကောင်းလိုက်တာ။ အဲဒီကို ရောက်သွားရသလိုပါပဲ။ thanks :)
မေဇင် August 24, 2010 at 8:33 PM
အမြင့် အရမ်းကြောက်တယ်.... Flyer လက်မှတ် အလကား ရတာတောင် မစီးရဲလို့...ခုလဲ လုံးဝ တက်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူး... အပေါ်စီးကနေ ရိုက်ထားတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ကြည့်တာတောင် အသဲတစ်အေးအေး နဲ့...း))